मान्छेको चिउँडोबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ को कति भाग्यमानी भनेर ?
जनवरी 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments चिउँडो, भाग्यमानी
खासगरी मानिसलाई सुन्दर बनाउन अनुहारका अंगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर समुन्द्रशास्त्रका अनुसार अनुहारका अंगहरुको सौन्दर्यजनक मात्र नभएर अरु पनि विभिन्न महत्व छन् । त्यस्तै महत्वपूर्ण अंग हो चिउँडो । मानिसका स्वभाव, गुण अवगुण थाहा पाउन उसको चिउँडो हेरे पुग्ने समुन्द्रशास्त्रको दावी छ ।
बाहिर निस्किएको चिउँडो
सलक्क परेको चिउँडो
यदि कसैको चिउँडो गोलो आकारको छ भने यस्ता ब्यक्ति भावुक हुने र साना साना कुरामा पनि भड्किने हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले हरेक काम हतारमा गर्छन् र काम विगार्छन् पनि । आफूलाई क्रोधी देखाउने यिनीहरुको स्वभाव हुन्छ । क्रोधको समयमा उत्तेजित भएर असंयमित काम समेत गर्छन् । यस्ता ब्यक्तिहरु आफ्नो कुरामा अडिग हुन्छन् र स्पष्ट कुरा गर्छन् ।
भाग्यमानी मानिससँग हुने ६ कुराहरु
← होसियार ! भुलेर पनि नखानुस् यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्यान पनि जान सक्छ !
नेपालको विकास गर्न विज्ञान तथा प्रविधिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ – पूर्वमन्त्री शाह →
मे 16, 2019 मे 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0